Usoro QGIS kacha mma na Spanish - Geofumadas
Jenụwarị, 2018 Akụziri CAD / GIS, qgis
Inweta usoro QGIS bụ n'ezie ebumnuche nke ọtụtụ maka afọ a. N'ime mmemme mmemme mmeghe, QGIS abụrụla azịza kachasị mkpa, ụlọ ọrụ nkeonwe na ndị gọọmentị.
Ya mere, ọ bụrụgodị na ị kwadoro ArcGIS ma ọ bụ ngwá ọrụ ọzọ, tinyere ya na QGIS amaliteghachi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrụ.
Nke a bụ nchịkọta Spanish QGIS usoro ndị ọzọ maka ịhọrọ. Enyeworo m ha ọnụahịa, malite na nke dị ala ruo na nke kasị elu. Agbanyeghị na etinyela m data agbakwunyere, dị ka ọnụọgụ nke awa na ụbọchị echere maka ọmụmụ ihe na-amalite na 2018.
Mba aha Oge Inicio Ahịa Onye na-enye ihe
1 Mụta QGIS Basic Geographic Information System (GIS) free free 50 $ Holger Bermeo - Udemy
2 Nhazi nke QGIS 8 izu free 60 $ Gidahatari
3 Ezigbo QGIS sitere na ncha na ntụgharị uche dị na Agriculture free free 70 $ Pedro Barrera Puga - Udemy
4 Mụta QGIS site na ncha. GIS na-enweghị ego free free 75 $ GeoCastAway - Udemy
5 Oge Akwukwo Igbo Awa 30 free 80 € IniSIG
6 Nyocha na Geographic Information Systems na QGIS Ọnwa 3 3-ene-2018 137 $ Mahadum nke Geographers nke Peru - ICIP
7 Egwu Online QGIS 2.18 Las Palmas Awa 60 11-ene-2018 200 € MappingGIS
8 QGIS na ahịhịa dị n'ịntanetị - ọkwa onye ọrụ Awa 80 22-ene-2018 240 € Ihe ọmụmụ GIS - TYC GIS
9 QGIS nhazi ọkwa Awa 90 15-feb-2018 248 € Imaghị
10 Usoro nke QGIS - Geographic Information Systems 4 izu 5-ene-2018 300 $ MasterSIG
11 QGIS Agụmakwụkwọ: Okwu Mmalite nke Usoro Ịgba Ọkwa Geographic Awa 60 30-ene-2018 250 € GeoInnova
12 QGIS - Anyị nwere talent Awa 100 akọwaghị ya 250 € Ọhụụ Geospatial EN
13 QGIS Geographic Information System (GIS) Oge 32 Presencial akọwaghị ya 470 $ GIS Mexico
Dịka i si hụ, enwere ụzọ ndị ọzọ. Agbanyeghị, ị nwere ike ịnọ na-eche, sị:
Kedu ụdị nke ga-adakwasị m?
1. Usoro ọmụmụ n'efu. Ọ bụrụ na ị na-eme ọsọ ọsọ ịmụ ihe, nkuzi n'efu bụ nhọrọ kachasị mma, ebe ha anaghị achọ ka ị gaa n'usoro nke otu ndị otu ndị ọrụ ibe gị. N'echiche a, usoro Udemy bụ ezigbo ihe ọzọ, ị nwere ike ịmalite n'oge ọ bụla ma ịnwere ike ịhụ ha ruo mgbe ebighi ebi, n'adịghị ka ndị ọzọ na ị nwere ohere naanị maka oge ahụ.
N'ihi na ha bụ nkuzi n'efu, ha na-adịkarị ọnụ ala. Ọzọkwa, site na ịbelata oge ị nwere ike ịchọta ha maka ihe na-erughị $ 15.
2. Otu Usoro. Ọ bụrụ na ịnọghị ọsọ ọsọ ma chọọ ịme usoro n'oge oge a kara aka, ụzọ ndị ọzọ dị n'etiti 200 na 250. Ndị a bụ ndị mebere, mana ha na onye nkuzi na otu ndị ọrụ ibe gị, nke ị na-erite uru nke enyemaka onye nkuzi na ndụmọdụ / azịza si ụmụ klas anyị na forums.
Otu uru nke ụdị a bụ na ha jikọtara ya na usoro Nna-ukwu, n'ihi ya ị nwere ike ịme ihe ndị ọzọ dị elu na ịnweta mgbasa ozi ego.
3. Ihu ihu na ihu. Nke a na-enye na-esiwanye belata, ka na-eji mahadum maka ụmụ akwụkwọ na kampos; na ọghọm nke ụgwọ dị elu yana ihe metụtara njikọ oge, okporo ụzọ, na ịkwaga na klaasị. Dị ka ihe atụ, anyị na-etinye GIS Mexico, nke karịrị $ 470 na 32 awa. Ọ bụ ezie na usoro a dị ezigbo mma, ọ ga-ejedebe na mpaghara ala amaara ama.
Kedụ banyere nzere ntozu?
Ọ dị mkpa na nkuzi ọ bụla ị natara ị chọrọ ihe akaebe. Nke a nwere ike ịbụ diplọma dị mfe site na ụlọ ọrụ na-ebubata ngwaahịa, nke ị nwere ike ịkwado ịmaliteghachi gị, dịka ha na-ajụkarị maka ya mgbe ị gosipụtara ya na mmalite gị. Ọ bụrụ na ha ka na-enye gị nzere ntozu nke dị ka isi iji mezue diplọma ma ọ bụ nzere masta, nke ka mma.
Ọ bụrụ na ị maara ihe ọmụmụ QGIS ndị ọzọ n'asụsụ Spanish ndị a na-emepụta oge, echela ka ị mara.
Mụta Open Source GIS Stack: QGIS 3x DesktopGhọọ ọkachamara na oghere GIS stack na desktọọpụ QGIS 3.0.€ 29.99€ 20.99 4.2
Bestseller Nkọwapụta Data Spatial Data Analysis: Nhazi GIS na R na QGISNwee Ọganihu na Nkọwapụta Data Data Na-eji R & QGIS Site na ịrụ ọrụ na ezigbo ọrụ - Get Job Job Data!€ 199.99€ 139.99 4.3
Ndabere nke GIS & GIS Web: QGIS, ArcGIS Pro & Online, GeoServerYou chọrọ ịmalite GIS na Web GIS Weber na ntuziaka kwesịrị ekwesị na Ihe Ọmụma Asụsụ na ihe abụọ a, mgbe ahụ ENROLL ... !!€ 199.99€ 139.99 4
[Intermediate] Spatial Data Analysis na R, QGIS & MoreGhọọ onye na-emeghe ihe GIS Guru ma na-egbochi ịkọwapụta data gbasara data site na iji R, QGIS, GWAGI€ 199.99€ 139.99 4.4
Isi GIS: eji ala zoo & ngbanwe nchọpụta na QGISBụrụ onye ọkachamara na QGIS maka nyocha data gbasara ala (ntụgharị. Sensing & GIS Remote) ma mụta iji Land Land na Land Map.€ 24.99€ 16.99 4.3
GIS maka ndị mbido #1: QGIS 3 Usoro. + EBook 111p n'efuNtuziaka QGIS: Gaa na interface. Mepụta Map Thematic. Mụta isi GIS, nyocha ụwa na ọdịdị ala€ 39.99€ 27.99 4.4
GIS na QGIS 3 maka ndi nmalite (oru ngo na akwukwo)Muta QGIS 3 site na okpu site na idozi ezigbo oru ngo wee nweta ndu e-book bonus€ 34.99€ 23.99 4.6
GIS maka ndị mbido #2: Georeference & Digitize na QGIS3 + eBookNtuziaka QGIS: Mụta iji Digitizing na georeferencing jiri akụrụngwa ọ bụla Office nwere. GIS, QGIS 3, ọdịdị ala, Q GIS€ 39.99€ 27.99 4.3
GIS: Ghota Usoro ahụ ma Mee GIS na QGISMụta usoro ihe ọmụma nke Geographic Information Systems, ma zụọ azụ na ịmepụta map na nyochaa data gbasara data na QGIS.€ 94.99€ 64.99 3.7
Okwu Mmalite nke GIS: Nnyocha Data Spat na QGISMụta GIS, nyocha nke gbasara, ntanetị weebụ ma aka zuru ezu na ọrụ GIS na QGIS€ 149.99€ 104.99 4
Ọkwa GIS & QGIS 2: Dezie elu, Styling, Diagram & La layoutAgụmakwụkwọ a ga-eme ka ị too n’ihu na Shapefile edezi, Maapụ 2.5D, Grid Map, Symbology, La map na eserese na ndị ọzọ€ 199.99€ 139.99 4.3
Mụta usoro ozi gbasara mpaghara (GIS) na QGISmụta ka esi eji ngwanrọ GIS mepee emepe ihe gbasara oghere€ 39.99€ 27.99 3.6
New Mmepe ngwa QGIS na PythonTinye QGIS jiri arụmọrụ gị rụọ ọrụ€ 99.99€ 69.99 4.6
Nchọpụta igwe na QGIS: Ntọala nke Satellite Ihe nyochaBụrụ onye maara ihe na nyocha nyocha na QGIS & nyocha gbasara ohere / nyocha ọrụ na echiche dị mkpa na QGIS€ 19.99€ 13.99 4.4
QGIS 3.10 LTR maka ndị ọkachamara GISMụta otú ị ga-esi mee ka ike nke QGIS dịkwuo mma iji meziwanye atụmatụ ụlọ ọrụ gị€ 99.99€ 69.99 4.3
Bestseller Okwu Mmalite nke Data Data na PostGIS na QGIS 3Mụọ Spatial SQL na njikwa nchekwa data maka ọkachamara GIS€ 99.99€ 69.99 4.6
Okwu mmalite maka GIS na QGIS 3Mụọ isi nke GIS wee nwee nkwekọrịta na QGIS interface.€ 19.99€ 13.99 4.2
Automatic QGIS 3.xx na PythonWere nkà QGIS gi ozo€ 99.99€ 69.99 4.5
Bestseller QGIS Baa Uru Maka Nnyocha Ndị Na-enyocha Spatial: Amalitere ọkachamaraSistemụ Ihe Nleba nke Master (GIS) Maka Nnyocha Data Spatial na QGIS: Gaa na Ntọala nke Tolọ Ọrụ Gbanụ€ 149.99€ 104.99 4.3
Ọkwa GIS & QGIS 1: Isi nke QGIS (Versiondị 3.8)Youchọrọ igwu egwu na GIS na Ubi nke QGIS?! Debanye aha na usoro a iji malite ịkpọ na QGIS!€ 199.99€ 139.99 4.2
Previous Post«Previous Ala a abụghị ire ere
Next Post Isi ihe iri mere eji eme ka amara data mpagharaNext »
2 Na-aza "Usoro KGIS kacha mma na Spanish"
QGIS kwuru, sị:
M gbakwunye QGIS mbido nke ọma.
Ana m ekele gị nke ukwuu Ọ ga-adịrị m mma.